China Galvanized ပြားချပ်ချပ်သံမဏိစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
အမျိုးအစား- သံမဏိကိုယ်ရေးအကျဉ်း Tags: ASTM A36၊ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ၊ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ချန်နယ်သံမဏိ၊ Galvanized H-beam သံမဏိ၊ Galvanized I-beam သံမဏိ၊ Galvanized စတုရန်းသံမဏိ၊ Q195၊ Q235၊ Q235B၊ S235JR၊ SS400B
ကုသိုလ်ကံ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိပြား
နိဒါန်း Galvanized flat steel သည် အကျယ် 12-300mm၊ အထူ 4-60mm၊ rectangular cross-section နှင့် အနည်းငယ်တုံးသော အစွန်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြားချပ်ချပ်စတီးလ်သည် သံမဏိအချောထည်ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် သွပ်ရည်စိမ်ထားသောပိုက်နှင့် သွပ်ရည်စိမ်ထားသောအကွက်အတွက် ဗလာအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။1. မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့်အလင်းဖွဲ့စည်းပုံ- ခိုင်မာသောဂရစ်ဖိအားဂဟေဖွဲ့စည်းပုံသည်မြင့်မားသောဝန်ထမ်းများ၊2. လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်အကြမ်းခံ။
1. Flat steel သည် negative deviation ဖြင့် လှိမ့်ထားသော်လည်း ၎င်းကို အမှန်တကယ် အလေးချိန်အရ ပို့ပေးပြီး အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် စတီးပြားထက် 1 မှ5ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမြင့်ပါသည်။
2. ပြားချပ်ချပ်စတီးကို သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ပုံသေအထူ၊ ပုံသေအနံနှင့် ပုံသေအလျားများဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် ဖြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချပေးကာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို သက်သာစေကာ၊ လုပ်အားနှင့် ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည့်အပြင် ကုန်ကြမ်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးကာ အချိန်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို သက်သာစေပါသည်။ ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းပါ။
3. ထုတ်ကုန်များကို သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ကားလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ လှေကားထစ်စက်များနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတွင် ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုထားပါသည်။
ပစ္စည်း Q195၊ Q235၊ Q235B၊ SS400B၊ S235JR၊ ASTM A36 စသဖြင့်
အထူ: 6mm-40mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို
အနံ: 40mm-150mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို
လျှောက်လွှာ သွပ်ရည်ပြားပြားစတီးလ်ကို သင်္ဘောတည်ဆောက်မှု၊ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများ၊ သံမဏိဆန်ခါများ၊ လှေကားများ စသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ အချောထည်အဖြစ် သံကွင်း၊ ကိရိယာများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စက်လှေကားများ တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
စက်ရုံတွင် အဆင့်မြင့် စက်ကိရိယာများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်များ ပါရှိသောကြောင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အလွန်သာယာပြီး ပျော်ရွှင်ပါသည်။
ယခင်- သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ချန်နယ်သံမဏိ
နောက်တစ်ခု: သွပ်ရည်စိမ် H-beams များ
Flat Steel Sheets များ၊